အကွောငျးမြားစှာသော Google Analytics Script များ | Martech Zone
ဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် tools များပေါင်းစည်းမှုများနှင့်အတူ, ငါတို့ client များအများအပြား Google Analytics ကို script များစာမျက်နှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အတူပြissuesနာများရှိခြင်းကိုမြင်ရပါတယ်။ ဤသည်သင်၏အပေါ်အကြီးအကျယ်ပျက်စီး analyticsထို့ကြောင့် visitors ည့်သည်များ၊ လည်ပတ်မှုနှုန်းစာမျက်နှာများအလွန်များပြားလာခြင်းနှင့်တစ်ဟုန်ထိုးကျဆင်းမှုနှုန်းများပြားလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ပဲဂူဂဲလ် Analytics script ကိုသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာထည့်သွင်းဖို့ plugins ၂ ခုတင်ပြီး configure လုပ်ထားတဲ့ client ရှိခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ပလပ်ဂင်တစ်ခုက script တစ်ခုတင်ထားပြီးသားဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ဖို့တကယ်မစစ်ဘူး။ ရလဒ်မှာလည်ပတ်မှုသည်အလွန်အကျွံအစီရင်ခံခံရခြင်းနှင့်သူတို့၏တုံပြန်မှုနှုန်းသည် ၃% ခန့်ရှိသည်။ သင်၏တုန်ခါမှုနှုန်းသည် ၅% အောက်သို့ကျဆင်းသွားပါကသင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင် script များစွာပါ ၀ င်သည့်ပြhaveနာတစ်ခုရှိကြောင်းစိတ်ချပါ။
Analytics မှလွဲ၍ သင်ဤအရာကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်မည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။ နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏စာမျက်နှာ၏ရင်းမြစ်ကိုကြည့်ရှု။ ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် ga.js။ ဆိုက်ကိုသင်ကြည့်ရှုလိုလျှင်ပင် Google Analytics အကောင့်မျိုးစုံ, တစ် ဦး တည်းသာ script ကိုရှိသင့်သည်။
နောက်တစ်နည်းမှာသင်၏ developer tools ကိုသင်၏ browser တွင်ဖွင့်ပြီးစာမျက်နှာကိုသင် refresh လုပ်ပြီးနောက် network connection ကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ga.js script ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးတောင်းခံနေတာကိုမြင်လား။
ဂူဂဲလ် Analytics သည်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကို browser cookies များသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်၎င်းကိုဂူဂဲလ်၏ဆာဗာများသို့ပို့သော script တစ်ခုကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ပုံရိပ်တောင်းဆိုမှုကိုမှတဆင့်။ Script ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ရံမှာ cookies တွေကို overwrite လုပ်ပြီးရုပ်ပုံတောင်းဆိုမှုများစွာကို server သို့ပေးပို့သည်။ ဒါကြောင့်ပဲ တုံမှုနှုန်း အရမ်းနိမ့်သည်…သင် site တစ်ခုရှိစာမျက်နှာတစ်ခုထက် ပို၍ ကြည့်လျှင်သင် bounce မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ... အကယ်၍ သင်စာမျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုသင်လည်ပတ်သောအခါ Script များသည်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပစ်ခတ်လျှင်၊ သင်သည်စာမျက်နှာများစွာသို့သင်ရောက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
သင်၏စာမျက်နှာနှင့်သင့်ကိုစစ်ဆေးပါ analytics သင်၏သေချာစေရန် analytics script ကိုသင့် site ပေါ်တွင်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားပြီး၊ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး script ကိုမတော်တဆမဖြစ်စေရန်သေချာစေပါ။ သင်ပြုလုပ်ပါကသင်၏အချက်အလက်သည်မတိကျပါ။
Tags: တုံမှုနှုန်းgaga.jsanalytics google
Adobe SiteCatalyst သည်ရေငွေ့ဆုံးရှုံးနေသလား။
3:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 3, 32
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကို ငါ မှတ်ထားမယ်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်၏ အီလက်ထရွန်နစ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဆိုက်တွင် ၎င်း၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အစီရင်ခံစာတွင် အမှန်တကယ် အသွားအလာ မရှိရခြင်း အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် ထင်ပါတယ်။ google script သည် ၎င်း၏ google analytics အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည့် ခြေရာခံကုဒ်နှင့် ကွဲပြားသည်။ ကျေးဇူးပဲ သူငယ်ချင်း။
14:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 21
မင်္ဂလာပါ Douglas၊ ကြီးကျယ်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Google Tag Manager တွင် စမ်းသပ်မှုအချို့ကို စတင်လိုက်ကတည်းက အလားတူကျဆင်းသွားသည်-4Page/ Visits 🙂 နှင့် လက်ရှိ 0.47% 😀
သင့်ပို့စ်ကို လိုက်ကြည့်ရင်း၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်၏ရလဒ်။
1.Scripts- 1 ga.js ရှိသည် (ကျွန်တော်သည် Analytics နှင့် Tag Manager ၏ကုဒ်ကိုသာ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်ထဲသို့ ကူးထည့်ထားသည်)။ ဒုတိယ ဇာတ်ညွှန်း (Tag Manager) တွင် ga.js သို့ မည်သည့်ရည်ညွှန်းချက်ကိုမျှ မတွေ့နိုင်သော်လည်း gtm.js သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် နှစ်ခုပေါင်းထည့်ထားသော ကုဒ်ကြီးတစ်ခုမျှမရှိပါ (ပထမပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်၊ ထို့နောက် TM)၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အက်ပလီကေးရှင်းကိုပင် အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သော်လည်း firebug ကိုလည်း စစ်ဆေးထားပါသည်။
2. Tag manager Console တွင် ကျွန်ုပ်သည် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသာ ဖန်တီးခဲ့သည် (ဖန်တီးချိန်နှင့် အတူတူ၊ စတင်သည့်အချိန် တူညီသည်)။ ဤဖြစ်ရပ်သည် အခြေခံအားဖြင့် Outbound Links အတွက် Link ကလစ်နားထောင်သူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပြီး ၎င်းသည် James Cutroni မှ ၎င်း၏ဘလော့ဂ်သို့ အကြံပြုထားသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အနည်းငယ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်- တစ်ခုကတော့ Non-Interaction Hit ကို True အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ် (ဒါက bounce rate မဖြစ်သင့်ဘူးလား?) ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ ကလစ်တွေကို ကွက်လပ်ထားမယ့်အစား Label=referrer တစ်ခု ထပ်ထည့်လိုက်တယ်၊ ဘယ်ကလဲ။ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ထင်သလောက် အသုံးမဝင်တော့လို့ ဒီနေ့ ဖြုတ်လိုက်တာပါ)
3. ကျွန်ုပ်တွင် onClick=”_gaq.push()” အဟောင်းဖြင့် ပြင်ပလင့်ခ်အချို့ကို ထည့်သွင်းထားသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးကို Non-interaction click ကို True ဟု သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။